merolagani - यसरी कति दिन संसद चलाउन हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाकाे जवाफ- ‘ओलीजीलाई सोध्नू’
यसरी कति दिन संसद चलाउन हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाकाे जवाफ- ‘ओलीजीलाई सोध्नू’
Sep 12, 2021 04:37 PM merolagani
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा बैठक सूचारु गराउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को भएको बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा आफ्नो पार्टी फुटाउने षडयन्त्रमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको भन्दै आईतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि चल्न दिएन । संसद बैठक लगातार अवरुद्ध भईरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले संचारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै संसद बैठक सुचारु कहिले हुन्छ ? भन्ने कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई सोध्न गरे । सञ्चारकर्मीहरुले ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, यसरी कति दिन संसद चलाउन हुन्छ ?’ भनि प्रश्न गरेका थिए । उनले त्यसको जवाफ दिँदै संक्षेपमा भन्नु भयो, ‘ओलीजीलाई सोध्नू’ ।
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना आफ्नो पार्टीले निष्काशन गरेका सांसदलाई संसद बैठकमा भाग लिन लगाएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नदिने अडान लिँदै आएको छ । आईतबारको बैठक पनि अवरुद्ध भएपछि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी भदौं २९ गते मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
रु रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेड (RURU) को लाभांश सुरक्षित गर्ने आज (असाेज ६ गते) अन्तिम दिन हो। कम्पनीले लाभांश वितरण तथा १५ औं र १६ औं वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले असोज ७ गते बिहीबार बुक क्लोज गर्ने भएको छ।
ओली सरकारका पालामा नियुक्त भएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय
Sep 21, 2021 06:23 PM
भदौ महिनामा कुन बैंकले कति बढाए व्यवसाय?
Sep 21, 2021 06:16 PM